Odayaasha dhaqanka Koofur Galbeed Soomaaliya oo ka hadlay qabashada doorashada. | Radio Gedo
Home BARNAAMIJYADA Odayaasha dhaqanka Koofur Galbeed Soomaaliya oo ka hadlay qabashada doorashada.
Odayaasha dhaqanka Koofur Galbeed Soomaaliya oo ka hadlay qabashada doorashada.
Qaar ka mid ah Odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda deegaanada dowlad goboleedka Koofur Galbeed ayaa sheegay in deegaanada maamulkaas aysan doorasho ka dhici doonin ilaa laga soo daayo Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur, kaas oo ku dhawaad seddax sano u xiran dowladda federaalka Soomaaliya.
Waxaa ay odayaasha dhaqanka koofur Galbeed ay shuruud ku xireen in doorasho lagu qabbto maamulkaasi, iyadoo ay dowladda Soomaaliya ka dalbadeen in la siidaayo Mukhtaar Roobow
Sidookale in Ra”iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya uu guddi xaqiiqo raadin usaaro xarigiisa iyo dib u heshiisiin uu u diro deegaanada K/Galbeed oo sida ay sheegeen xaalad cakiran ay ka jirto tan iyo markii hoggaanka maamulkaas loo dhiibay Madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen.
Tani ayaa waxaa ay ka mid noqon doontaa caqabadaha dhanka doorashada ee R/Wasaare Rooble uu wajahayo, maadama hore ay muran iyo dood ka taagneed arrinta Gobolada Waqooyi oo ay isku heestaan maamulideyda Ra”iisul Wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guleed iyo guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi
Previous articleJubbaland Oo Sheegtay Inay Jawaab Ka Bixin Doonto Qaraxii Lala Eegtay Ciyaartoyda
Next articleQarax lala eegtay Taliyaha ciidanka dhulka.